७० वर्षमा ४९ वर्ष कोइराला परिवार, कांग्रेसको कमान्ड देउवालाई | Hulaki Online
७० वर्षमा ४९ वर्ष कोइराला परिवार, कांग्रेसको कमान्ड देउवालाई
गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालासँग पराजित भएका देउवा संस्थापनमा देखिएको प्रस्ट विवादको फाइदा उठाउँदै यसपटक भने रामचन्द्र पौडेललाई ५२६ मतान्तरले पराजित गर्दै पार्टी सभापति बने
पुराना पर्चा च्यातिए, उज्यालो हुनासाथ नयाँ बने
पहिलो चरणको चुनाव नसकिादै सबै उम्मेदवारका प्रचार सामग्री निर्वाचनस्थलबाट हटाइएका थिए । तर, दोस्रो चरणको चुनाव हुने भएपछि बिहानै देउवा र पौडेलको पक्षमा नयाँ पर्चा र पोस्टर तयार भए । नयाा पर्चाका साथ नयाँ प्रचार भयो ।
पौडेल पक्षको मनोबल कमजोर, देउवा पक्षको उच्च
दोस्रो चरणको निर्णायक मतदानअघि नै पौडेल पक्षका प्रचारकहरूको मनोबल कमजोर देखिन्थ्यो । तर, स्वयं देउवाले जित भइसक्यो, औपचारिकता मात्र बााकी छ भन्दै हौस्याएपछि उनका समर्थकहरू भने उत्साही थिए ।
सिटौलालाई कार्ड बनाउने दुवै पक्षको कसरत
निर्णायक चुनावमा साथ दिन दुवै उम्मेदवारले सिटौलालाई आग्रह गरे । सिटौलाले प्रतिनिधिको मतदानलाई सम्मान गर्दै सहमति गर्न दुवै पक्षलाई अपिल गरेका थिए । यसले देउवा पक्षलाई नै सपोर्ट गरेको थियो । सहमति नभएपछि सिटौलाले मतदानमा भाग लिन प्रतिनिधिलाई आह्वान गर्दै अर्को विज्ञप्ति जारी गरे ।
प्रचारकै क्रममा झडपमा उत्रिए दुई पक्षका कार्यकर्ता
मतदान चलिरहेकै वेला माइकिङ गर्दै आएको समूहले ‘ताजा खबर ताजा खबर ! सिटौलादेखि खुमबहादुरसम्मको समर्थन पौडेललाई, ४१ जिल्लाका सभापतिले पौडेललाई दिए सहमति’ भनेर पौडेलको प्रचार गरेको थियो । भ्रमपूर्ण प्रचार गरेको भन्दै देउवा पक्षका कार्यकर्ता तत्कालै आक्रमणमा उत्रिएका थिए । तर, झडप प्रहरीले नियन्त्रण गर्‍यो ।
देउवाको प्रचारमा खुमबहादुर खड्का सडकमा
आइतबारको चुनावमा कार्यकर्ता मात्र खटाएका खुमबहादुर खड्का सोमबारको निर्णायक चुनावमा आफौ मैदानमा उत्रिएका थिए । उनले पचासौा कार्यकर्तालाई अघिपछि लगाएर देउवाका लागि भोट मागेका थिए । उनका समर्थक नारा लगाउादै थिए, ‘खुमबहादुर दाइ के भन्छ, शेरबहादुरलाई ले भन्छ ।’ खुमबहादुरले पौडेललाई सपोर्ट गरे भन्ने प्रचार चलेपछि उनी झन् सक्रिय भए ।
शेरबहादुर देउवाको जन्म सन् १९४६ जुन १४ मा डडेल्धुराको असिग्राम गाविस– ६ रुवाखोलामा किसान परिवारमा भएको हो । देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक गरेका छन् । उनले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट मानार्थ डिग्रीसमेत हासिल गरेका छन् ।
देउवा नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापक सदस्यमध्येका एक हुन् । उनी संघको दोस्रो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्विरोध चयन भएका थिए । उनी राजनीतिकै सिलसिलामा पटक–पटक गरी नौ वर्ष जेल बसेका थिए । ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा उनी डडेल्धुराबाट विजयी भए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारमा उनी गृहमन्त्री थिए । ०५१ र ०५६ को निर्वाचनमा पनि डडेल्धुराबाट निर्वाचित भए । ०६४ को पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचनमा समेत उनी निर्वाचित भएका थिए । दोस्रो संविधानसभामा उनी डडेल्धुरा र कैलाली– ६ मा निर्वाचित भएका थिए ।
०५२ भदौ २७ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा सबैभन्दा धेरैपटक प्रधानमन्त्री बन्ने नेतामध्ये एक हुन् । तीनपटकसम्म प्रधानमन्त्री भएका उनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट दुईपटक बर्खास्तमा परे । पार्टीभित्र चर्को अन्तर्संघर्षका कारण कारबाहीमा परेपछि उनले ०५९ असारमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) पार्टी स्थापना गरे । संविधानसभा निर्वाचनअघि ०६४ मा भने मूल पार्टी कांग्रेससँग एकीकरण भयो ।
देउवा ०६७ मा काठमाडौंमा भएको १२आँै महाधिवेशनमा सभापतिमा सुशील कोइरालासँग ३३५ मतले पराजित भएका थिए । ०७० माघमा भएको कांग्रेस संसदीय दलको नेताको चुनावमा पनि देउवा कोइरालासँगै पराजित भए । त्यसअघि ०५७ मा पोखरामा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनमा पनि सभापतिको उम्मेदवार भएका उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पराजित भएका थिए । देउवाको विवाह गृहमन्त्री पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा ४५ वर्षको उमेरमा डा. आरजुराज्यलक्ष्मी राणासँग भएको थियो । देउवादम्पतीका एक छोरा छन् ।
देउवा समर्थक उत्साही
कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपछि उनका समर्थकले सोमबार मध्यराति नै खुसियाली मनाए । मतदानस्थलमा देउवा आउने हल्ला चले पनि उनी आएनन् । ‘उत्ताउलो हुनुहुन्न,’ देउवाका सहयोगी नेता डा. प्रकाशशरण महतले नयाा पत्रिकासाग भने, ‘जिम्मेवारी थपिएको छ, जिम्मेवार हुन्छौँ ।’
दोस्रो चरणको चुनावमा देउवाले १८२२ मत ल्याए । प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेलले १२९६ मत ल्याए । सभापतिका लागि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ३१२० मत खसेको छ । पहिलो चरणको भन्दा २८ मत कम खसेको छ । आइतबार भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा ३१४८ मत खसेको थियो । कांग्रेस महाधिवेशनमा ३१६१ मतदाता थिए ।
पहिलो चरणमा सबैभन्दा कम मत ल्याएका प्रत्याशी कृष्णप्रसाद सिटौला बाहिरिएपछि सोमबार शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच सभापतिमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । मंगलबार महामन्त्री र कोषाध्यक्षको मतगणना हुनेछ ।
७० वर्षमा ४९ वर्ष कोइराला परिवार
दुई दशकपछि कोइराला नेतृत्व विस्थापित
कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई विस्थापित गर्दै ०५३ को नवौा महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला कांग्रेस सभापति भएका थिए । गिरिजाप्रसादले १४ वर्ष र सुशीलले ६ वर्ष कांग्रेसको नेतृत्व गरे । २० वर्षअघि भट्टराईले कोइरालालाई छाडेको जिम्मेवारी देउवाले फिर्ता लगेका छन् ।
७० वर्षमा ४९ वर्ष कोइरालाको नेतृत्व
कांग्रेसमा कोइराला परिवारका चार सभापति भए । ००३ मा राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनायता बिपीले पाँचपटक गरी २५ वर्ष, मातृकाप्रसादले दुईपटक गरी चार वर्ष, गिरिजाप्रसादले तीनपटक गरी १४ वर्ष र सुशील कोइरालाले कार्यबाहकसहित दुईपटक गरी ६ वर्ष कांग्रेसको नेतृत्व गरे ।
कृष्णप्रसाद एक्लैको नेतृत्वमा १९ वर्ष
कांग्रेसको सातौा महाधिवेशनले ०१६ मा बिपीलाई सभापति चयन गरेको थियो । तर, ०१७ मा पञ्चायती व्यवस्था आएपछि महाधिवेशन हुन सकेन । ०३४ मा बिपीले स्वास्थ्यको कारण देखाई कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यबाहक सभापति बनाए । ०३९ मा बिपीको निधनपछि पनि भट्टराई कार्यबाहक सभापति । त्यस्तै, ०४८ देखि ०५३ सम्म निर्वाचित सभापति रहे ।
सुवर्णशमशेरलाई दुई वर्ष
कांग्रेस इतिहासमा दुई वर्ष नेतृत्व गर्न पाउने नेता हुन् सुवर्णशमशेर । उनले ०१२ देखि ०१४ सम्म सभापतिको रुपमा कांग्रेसको नेतृत्व गरेका थिए । कोइराला खानदानबाहिर भट्टराई सुवर्णशमशेरपछि तेस्रो नेताका रूपमा उदाएका छन् शेरबहादुर देउवा ।
कलकत्ता : २००३ माघ
राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना । सभापति टंकप्रसाद आचार्य, कार्यकारी सभापति बिपी कोइराला
बनारस २००४– माघ
सभापति : बिपी कोइराला
बिहार २००५ – फागुन
सभापति : मातृकाप्रसाद कोइराला
कलकत्ता २००६ – चैत
सभापति : मातृका कोइराला
जनकपुर : २००९ – माघ
सभापति : सुवर्णशमशेर
विराटनगर : २०१४ जेठ
विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशन
काठमाडौं : २०१६ – वैशाख
पटना सम्मेलन : २०३४
२०१७ मा पञ्चायती
व्यवस्था आएपछि कांग्रेसको महाधिवेशन हुन सकेन । २०३४ मा बिपीले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यबाहक सभापति बनाए ।
झापा २०४९ – फागुन
सभापति : कृष्णप्रसाद भट्टराई
काठमाडौं २०५३ – वैशाख
सभापति : गिरिजाप्रसाद कोइराला
पोखरा २०५७ – माघ
काठमाडौं २०६२ – भदौ
काठमाडौं २०६७ – असोज
सभापति : सुशील कोइराला
काठमाडौं २०७२– फागुन
रमेश सापकोटा, मधुसुधन भट्टराई, रामकृष्ण अधिकारी/नयाँ पत्रिका